Tani waa sida ay u egtahay Axon A20 5G oo ka socota ZTE, mobiilkii ugu horreeyay ee leh kamarad shaashadda ah | Androidsis
Maalmo ka hor, madaxweynaha ZTE, Ni Fei, ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay taas shirkaddu waxay noqoneysaa tii ugu horreysay adduunka ee bixisa taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh kamarad soo-bandhig ah, wax inala qabay rajooyin sare tan iyo markaas, maadaama tan macnaheedu yahay in qalabku ku bixin doono xalalka sida daloolka shaashadda, qaansoorka ama moduleka kamaradda pop-up, si loogu banneeyo "dareemayaal hore oo aan muuqan" .
Iyada oo loo marayo qalab maqal iyo muuqaalba leh, ZTE ayaa shaaca ka qaaday sida qalabku ugu muuqdo qaab wax ku ool ah, isagoo mar kale xaqiijinaya in tan, oo imaan doonta Axon A20 5G, waxay adeegsan doontaa xalka horay loo sheegay. Marka xigta waxaan soo dhejineynaa fiidiyowga.
ZTE Axon A20 5G ayaa lagu muujiyay fiidiyow: waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 1
Sida aan sifiican u arki karno, ZTE Azon A20 5G ma qaadi doono shaashad qalooca, waa wax wanaagsan. Waxaa jira xoogaa yar oo xusid mudan laakiin aad u yar oo jilicsan oo ku habboon khibradda shaashadda oo buuxda ama aan dhammaanayn, sida qaarkood ay u ogaan karaan.
Moobaylku wuxuu noqon doonaa dhamaadka-sare, ama taasi waa waxa aan rajeynayno, maxaa yeelay ma aaminsani in hal-abuurnimadani ay ka soo muuqan doonto moobiil waxqabad dhexdhexaad ah ama ka hooseeya. Hadday sidaas tahay, waxay noqon doontaa wax lala yaabo, maadaama ay tahay mid si caddaalad ah u horumarsan oo qaadatay sannado horumar ah. Sidoo kale, waxaan ka takhalusi doonaa shakiga iyo malo awaalka 1da Sebtember, oo ah taariikhda la bilaabi doono terminal-ka.
Sidii aan horey u tilmaamnay - oo aan soo xiganay wixii aan soo sheegnay - Visionox waxay ahayd shirkada masuulka ka ah horumarinta tignoolajiyada “kamarada aan sawirada lahayn ee ZTE” Waxay sheeganeysaa inay ku xallisay arrimaha kor ku xusan isku-dar ah qalabka bandhigyada cusub iyo algorithms-ka software-ka, kaas oo mas'uul ka ah hagaajinta xaglaha aragtida iyo yareynta dhalaalka. Si kastaba ha noqotee, waa inaan sugnaa si aan u aragno sida wanaagsan - ama aan ahayn - natiijooyinka la gaadhay ayaa ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Eeg waxa ZTE ee Axon A20 5G u eg yahay, taleefanka kamaradda ugu horreeya ee aan la arki karin ee adduunka lagu arko! [+ Muuqaal]